July 15, 2019 - ThutaSone
July 15, 2019 ThutaSone 0
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအတွက် ထူးမြတ်လှတဲ့ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့..( ဓမ္မစကြာနေ့) အကြောင်း ဝါဆိုလပြည့်နေ့ ကား သန္ဓေ၊ တောထွက်၊ ဓမ္မစက်၊ တချက် ပြာဋိဟာ ဆိုသည့် အတိုင်း ဂေါတမမြတ်စွာ ဘုရားရှင် ပဋိသန္ဓေ နေတော်မူခြင်း။ တောထွက်တော်မူခြင်း။ တရားဦးဓမ္မစကြာကို ဟောကြားတော်မူခြင်း။ ရေအစုံ မီးအစုံ တန်ခိုးပြာဋိဟာကို ပြသတော်မူခြင်း။ […]
စတိုးဆိုင်ထဲမှ၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို မဖွယ်မရာလုပ်တဲ့ လူကို ဖမ်းလိုက်ပါပြီ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မိန်းကလေးကို မဖွယ်မရာပြုနေတဲ့ CCTV မှတ်တမ်း ရုပ်သံဖိုင် မလေးရှားနိုင်ငံက မုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ မုန်လာဝယ်နေတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်မှ အကြီးမလေးကို ပြုလုပ်နေတာပါ။ အခု ဒီဗွီဒီယိုဖိုင်လေးကို တွေ့မြင်သူတိုင်း သမီးရှင်မိဘများအတွက် မိမိရဲ့ ရင်သွေးငယ် သမီးလေးမျာကို […]
ကျောင်းသူလေး ဗစ်တိုးရီးယားအမှု တရားသူကြီး ၂ ပါးထိုင် တရားခွင်စနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးမည်
ကျောင်းသူလေး ဗစ်တိုးရီးယားအမှု တရားသူကြီး ၂ ပါးထိုင် တရားခွင်စနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးမည် နေပြည်တော်ရှိ Wisdom Hill ပုဂ္ဂိလက မူကြိုကျောင်းက ကျောင်းသူလေး ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့အမှုကို တရားသူကြီး ၂ ပါးထိုင် တရားခွင်စနစ်နဲ့ စစ်ဆေးမှာ ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးရာမှာ ထူးခြားတာ ၃ ခုရှိမယ်လို့ ဒီအမှု […]
မူကြိုကျောင်းဆရာမလေး ကြိုးကွင်းစွပ် အသတ်ခံရသည့် အနေထားဖြင့် ပြန်လည်တွေ့ရှိ
ပျောက်ဆုံးနေသော မူကြိုကျောင်းဆရာမလေး ကြိုးကွင်းစွပ် အသတ်ခံရသည့် အနေထားဖြင့် ပြန်လည်တွေ့ရှိ မွန် ဇူလိုင် ၁၅ အမွှာညီနောင် ပျောက်ဆုံးနေသော မူကြိုကျောင်းဆရာမလေးအား (၁၀)ရက်အကြာ၌ ကြိုးကွင်းစွပ် အသတ်ခံရသည့်အနေထားဖြင့် ပြန်လည်တွေ့ရှိ။ မုဒုံမြို့နယ် ကော့ခပုံကျေးရွာမှ (၆.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့ညနေ၌ ပျောက်ဆုံးနေသော မူကြိုကျောင်းဆရာမအား ( ၁၅.၇.၁၉)ရက်နေ့ ညနေ၃ နာရီချိန်ခန့်၌ […]
ကျနော် မချမ်းသာပါဘူငယ်ငယ်တုန်းက ဆင်းရဲခဲ့တော့ သားသမီးတွေ လူတန်းစေ့ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ခင်လှိူင်
ကျနော် မချမ်းသာပါဘူငယ်ငယ်တုန်းက ဆင်းရဲခဲ့တော့ သားသမီးတွေ လူတန်းစေ့ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ခင်လှိူင် ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်ကတော့ သူ ငယ်စဉ်အခါက အရမ်းဆင်းရဲခဲ့တာကြောင့် သားသမီးတွေကို လူတန်းစေ့ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ကျနော် မချမ်းသာပါဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းက […]
ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီး ဝါဝါဝင်းရွှေကသမီးလေးကို ကြည့်ပြီး ချစ်မဝ ဖြစ်လို့နေ
ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီး ဝါဝါဝင်းရွှေက စန္ဒီမြင့်လွင်နဲ့ သမီးလေးကို သွားတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သမီးလေးကို ကြည့်ပြီး ချစ်မဝ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သလို ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တဲ့ ဝါဝါဝင်းရွှေက စန္ဒီမြင့်လွင်နဲ့ သမီးလေးကို သွားရောက် တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဝါဝါဝင်းရွှေတစ်ယောက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြေးမလေးကို ကြည့်ပြီး ချစ်မဝ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ […]
CID ရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ဥပဒေရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဦးခင်မောင်မြင့်
CID ရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ဥပဒေရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဦးခင်မောင်မြင့် နေပြည်တော် Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှာ တက်ရောက်နေတဲ့ ကလေးငယ်တဦးကို အဓမ္မ ပြုကျင့်မှုနဲ့ တရား ရုံးက ပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့သူ သံသယ တရားခံ အောင်ကြီးကို ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ နောက်တကြိမ်ဖမ်းဆီးပြီး မုဒိမ်းမှု […]
အမိုက်စားဇိမ်ခံကားကြီးကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ Video
အမိုက်စားဇိမ်ခံကားကြီးကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ Video နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့အသည်းကို ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင်ဆွဲယူဖမ်းစားထားနိုင်သူကတော့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုအနုပညာတိုင်းကို လူတိုင်းကမချီးကျူးပဲ မနေနိုင်အောင်ကိုဖြစ်ရတာပါ။ သရုပ်ဆောင်၊အဆိုတော်သာဖြစ်ရုံသာမကပဲ ဝတ္ထုများကိုရေးသားတဲ့ စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ စိုင်းစိုင်းဟာ အနုပညာမျိုးရိုးရှိသူမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်ကာ အောင်မြင်မှုရရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့သီချင်းတိုင်းဟာကိုလည်း လူကြီးလူငယ်မရွေးကြိုက်နှစ်သက်ကြတာပါ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ပိုင်Production ထောင်ကာ တက်သစ်စအဆိုတော်များကိုလည်း မြေတောင်မြှောက်ပေးသူတစ်ယောက်လည် ဖြစ်ပါတယ်။ […]
ထောင်​ချောက်​ဆင်​ဖမ်​းခံခဲ့ရသောဂန်​့ဂေါကဆရာမလေး လွှတ်​လိုက်​ပါပြီတဲ့… ဂန်​့ဂေါက ဆရာမလေး အပြစ်​မရှိ၍ တရားသေ လွှတ်​လိုက်​ပါပြီတဲ့(ရှယ်​ပေးပါ)….ဆရာမလေးအတွက်​ SH-MEDIA ကတတ်​အားသရွေ့လှူဒါန်​းကူညီခဲ့ရ၍ ကျေနပ်​မိပါသည်​။ လူယုတ်​မာတစ်​စုကစိတ်​ကြွဆေးပြားဖြင်​့ပစ်​၍ ထောင်​ချောက်​ဆင်​ဖမ်​းခံခဲ့ရသောဂန်​့ဂေါကဆရာမလေးကိုဂန်​့ဂေါမြို့နယ်​တရားရုံးက မှန်​ကန်​မျှတစွာစစ်​ဆေးပြီး…. ယနေ့15-7-2019နေ့တွင်​ဆရာမလေးမသန်​းသန်​းမြင်​့သည်​ အပြစ်​မရှိကြောင်​းထင်​ရှားသဖြင်​့ မြို့နယ်​တရားသူကြီးဦးလင်​းထိန်​က တရားသေလွှတ်​လိုက်​ပါသည်​လိုသိရှိရပါသည်​။ ဂန်​့ဂေါကဆရာမလေးကို—–မီဒီယာမှ အမှုဆောင်​အရာရှိချုပ်​———က ကာမလိမ်​လည်​ခြင်​းဖြစ်​ရပ်​ဖြစ်​ပွားခဲ့သောကြောင်​့ ဆရာမလေးက ဂန်​့ဂေါတရားရုံးတွင်​တရားစွဲဆိုခဲ့သဖြင်​့အမှုရင်​ဆိုင်​နေစဉ်​ …. လူယုတ်​မာတစ်​စုက စိတ်​ကြွဆေးပြားကို […]
Victoria လေးရဲ့ အမှုအတွက် အမှန်တရား ဖော်ထုတ်ရေး စတင်လှုပ်ရှားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာလွတ်လပ်သော ရှေ့နေများအသင်းချုပ် ထုတ်ပြန် ….. သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၄/၂၀၁၉ ၁-နိုင်ငံတဝှန်းလုံးတွင်သမီးငယ်လေး Victoria ၏အမှု၊ အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် စိုးရိမ်စိတ်များ အကြီးအကျယ်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ ၂-ယင်းအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များသည် အမှုအားစစ်ဆေးကြားနာမည့် တရားရုံးအပေါ်မလိုလားအပ်သော သြဇာသက်ရောက်မှု၊ […]